Jerome Boateng: “Dagaalka Lionel Messi ee Barcelona wuxuu jiray ka hor kulankii Bayern Munich” – Gool FM
Jerome Boateng: “Dagaalka Lionel Messi ee Barcelona wuxuu jiray ka hor kulankii Bayern Munich”
(Munich) 31 Agoosto 2020. Ciyaaryahan Jerome Boateng ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka Lionel Messi iyo Barcelona uu jiray ka hor kulankii ay wada dheeleen Bayern Munich iyo Barca ee Champions League.
Waxa uu sheegayaa Difaaca Jerome Boateng in arrinta dagaalka Lionel Messi iyo Barcelona ay ahayd mid soo jiitamaysay ka hor inta aan la baasan kulankii ay guuldarrada culus kala kulmeen Bayern Munich.
Xasuuq ba’an oo 8-2 ah ayaa Barcelona loogu geystay Magaalada Lisbon, waxaana uu ahaa kulankii ugu dambeeyey oo uu ciyaaray Messi kaasoo tan iyo markaas si rasmi ah ugu wargaliyay Kooxdiisa inuu doonayo inuu si xor ah uga tago xagaagaan.
Laakiin calaamado muujinaya qanacsanaan la’aan ayaa soo muuqday ka hor inta aan xitaa la baasan kulankii semi-finalka Champions League ee ay khasaaraha kala kulmeen kooxda Bayern Munich, iyadoo Boateng uu xusay in dagaalka ka dhex taagan Messi iyo Barca aysan ka dambeyn kooxaha ka soo jeeda oo kala jeedo kooxdiisa reer Jarmal.
‘Waxaad horay u ogaatay inuu jiro musalsal u dhaxeysa Messi iyo Barcelona,’ Boateng ayaa u sheegay Wargeyska Bild.
Tan iyo markii ay guuldarrada kala kulmeen Bayern Munich, xiddiga reer Argentine ee Messi ayaa si xoog leh loola xiriirinayey Kooxda Manchester City halkaasoo uu joogo macallinkiisii hore ee Pep Guardiola.
Boateng waxa uu intaa raaciyay: “Pep iyo Messi waxay si wadajir ah ugu dabaaldegeen guulo waa weyn, waana sababtaas in labada dhinacba ay u ogaadaan in falsafadooda ay isla jaan qaadi doonaan.”